TAMBAJOTRAN-TSERASERA : Misy mahavita ny tsy fanao hakana ‘j’aime’
Fanatsarana na faniratsirana fivavahana, fihantsiana adim-poko, fanaovana fihetsika mamoafady, famoahana sary mibongigny, fanomezana hevitra manokana amin’ny zava-misy, fagnasahasana olona… 12 janvier 2018
Samy manao izay tiany ny rehetra amin’ny tambajotran-tserasera entina hanintonana mpamaky sy hakana ‘j’aime’.
Nahazo vahana eto Madagasikara ny tambajotran-tserasera. Ny facebook no tena maro mpanaraka eto Madagasikara hatreto, raha mitaha amin’ny twitter sy Instagram na LinkedIn. Samy mampiasa azy amin’izay ilany azy izy io ireo mpampiasa izany, misy ny amin’ny mahasoa, misy ny mahafinaritra, ao ny manao bizina sy mivarotra, ny mifanampy… misy dia misy tokoa anefa ny mampiasa azy io amin’ny zavatra ratsy, entina hisolokiana, hanaratsiana olona, hitiliana ny ho lasibatra amin’ny halatra sy vaky trano na fanendahana, ivarotan-tena… Misy kosa ny maneho izao hadalana rehetra izao entina isarihana olona. Ny resaka fivavahana sy fiaviana no tena anisan’ny maro adihevitra miafara hatramin’ny ady sy fifanompana. Misy koa anefa ireo sahy mamoaka ny vatany manontolo, hatramin’ny tokony hafenina imasom-bahoaka, isintonana mpijery hatrany. Hatreto dia mbola vitsy ny mahazo vola amin’ny fikirakirana ny tambajotran-tserasera fa fitiavana te halaza no manosika ny maro amin’izy io.
Ilaina araka izany ny fahamalinana, indrindra ho an’ny ray aman-dreny, mba hanara-maso ihany ny ataon’ny zanany amin’ireny tambajotran-tserasera ireny. Ankoatrany pejy manokana dia misy koa ny vondrona. Misy mantsy dia entina hamoriana tanora maro sy itarihana azy ireny amin’ny zavatra hafahafa ny vondrona, toy ireny lazain’ny tanora fa fianakaviana facebook ny kanijah ka nahitana zava-doza maro nataony. Voafaritra ny taonan’ny olona mahazo manao facebook, eo amin’ny 16 taona eo, araka ny lalàna facebook.
Tsy voafehy anefa izany fa ny taona nahaterahany fotsiny no ovainy dia afaka miditra ao na zaza vao 11 taona aza. Maro ireo vondrona mampiasa ny tambajotran-tserasera amin’ny fifampitaizana sy ny zavatra mahasoa : torohevitra amin’ny fahasalamana toy ny vondrona “fitsaboana ady gasy”, “fampirindrana ny fifamoivoizana”, “fandrahoana sakafo” eo koa ny fifampizarana zava-misy toy ny “Anao ny sehatra”... Ao koa ny fianarana teny malagasy sy tantara malagasy toy ny « mamohaela », « fizarana soatoavina », « fampianarana fomba fikolokoloana endrika sy tarehy », « fitaizana zaza »...
Misy dia misy ihany koa anefa mahavatra mamorona vondrona entina hifandrangitana sy hifamaliana. Efa misy ny lalàna mikasika ny fampiasana azy ireny eto amintsika. Efa misy ihany koa ny voasambotra sy nidoboka am-ponja noho ny fanaratsiana olona, fisolokiana tamin’ny tambajotran-tserasera. Na izany aza mbola tsy dia voafehy loatra ny zavatra mety ho hita ao ka ilana fahamalinana.